थप ४३९२ जनामा को’रोना सं’क्रमण पुष्टि !
३० आश्विन २०७७, शुक्रबार १६:४५ प्रकाशित
काठमाडौं– पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप ४ हजार ३ सय ९२ जनामा को’रोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । २४ घन्टामा देशका विभिन्न प्रयोग शालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा ४ हजार ३ सय ९२ जनामा को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण पोजे टिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका हुन्।
यो सहित नेपालमा को’रोना सं’क्रमित हुनेको जम्मा संख्या १ लाख २६ हजार १ सय ३७ जना पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ५ सय २२ जना सं’क्रमण मुक्त भएका छन। योसँगै ८८ हजार ४० जना निको भएका छन। यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा १६ हजार ५ सय ३१ जनाको पीसीआर प’रीक्षण भएको छ । हाल देशभर ३७ हजार ३ सय ८२ जना सक्रिय सं’क्रमित रहेका छन।
यस्तै पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा को’रोना संक्रमणवाट थप २१ जनाको नि’धन भएको छ। योसँगै को’रोना सं’क्रमणवाट आजसम्म नि’धन हुनेहरुको जम्मा संख्या ७१५ पुगेको छ।आज शुक्रबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले सो जानकारी दिएका हुन।
अहिले सम्मकै कडा, निषेधाज्ञा लागू हुने संकेत